Wacaal daray ah: Madaxweyne Farmaajo, Afwerke iyo RW Abiy Axmed oo Casmara ku kulmaya – Radio Daljir
Seteembar 5, 2018 2:31 g 0
War galabta ka soo baxay Wasiirka Warfaafinta Eriteriya, Yemane Meskel, ayaa lagu shaaciyey in RW Abiy Axmed iyo Madaxweyne Farmaajo ay kulan saddex geesood ah la yeelanayaa Madaxweyne Afwerke. RW Axmed Ayaa isla galabta ka dagay Casmara.
Sidoo kale daqiiqado kahor war saxaafadeed ay faafisay “Villa Soomaaliya” ayaa lagu shaaciyey in “Madaxweyne Farmaajo, Raysalwasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo Madaxweynaha Ereteriya Isaias Afwerki ayaa la qorsheeyey in ay ku kulmaan magaalada Asmara, 6-da iyo 7-da bisha Sebteembar 2018, si ay uga wada xaajoodaan adkaynta xasilloonida amni iyo dhaqaale ee gobolka ee Geeska Afrika.”
Faafinta Wasiir Yemane Meskel, Wasiirka Warfaafinta Eriteriya, ayaa lagu caddeeyey in shirka saddex geesoodka ah la rajanayo in lagu soo gunaanado heshiisyo ay hore u galeen madaxda saddexda dal.
Heshiisyada ayaa waxaa ugu horreeyey kii gegida diyaaradaha ee Xamar ku dhexmaray Farmaajo iyo Abiy Axmed, laguna qorsheeyey in Itoobiya ay maalgashato illaa 4 dekadood oo Soomaaliya oo ku kala yaal badda Hindiya iyo Gacanka Cadmeed.
Dhanka Itoobiya iyo Eriteriya, waxaa la rajaynayaa in la dhammaystiro heshiiska nabadeed iyo kan ganacsi ee labada dal, ayna ugu muhiimsantahay isticmaalka dekedaha Casab iyo Masawac ee Eriteriya.
Waxaa xusid mudan in dalka Jabuuti uusan qayb ka ahayn isu-soo-dhawaanshaha saddexda dal ee Soomaaliya, Itoobiya iyo Eriteriya. Waxaa kaloo xusid mudan in heshiis ganacsi oo dhexmara Eriteriya iyo Itoobiya uu dhabarjab weyn ku yahay Jabuuti iyo Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle.
Qorshaha isusoodhawaanshaha saddexda dal ayaa la tuhmayaa in ay ka danbayso dowladda Imaaraadka Carabta oo cadaawad dhanka dekedaha ay dhexmartay Jabuuti, ayna ka go’antahay in ay go’doomiso dowladda Jabuuti.
Sidoo kale dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee Jabuuti iyo Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, siiba siyaasaddiisa ganacsi iyo midka juquraafiga siyaasadeysan ee Jabuuti iyo Shiinaha, ayaa ah mid uusan dalka Mareykanku raalli ka aheyn.
Shiinaha iyo Mareykanku waxa ay Jabuuti ku leeyihiin laba saldhig milatari oo isku muuqda. Mareykanka ayaana walaac ka muujiyey xiriirka siyaasadeed ee Jabuuti iyo Shiinaha.
Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa ah saaxiib dhow ee dowladda Mareykanka, badanaana matasha danaha Mareykanka ee gobolka, dhan ganacsi iyo dhan milatari.
Gobolka Geeska Afrika ayaa u muuqda mid galay marxalad siyaasadeed oo cusub, aan se la hubin cidda haysa hoggaanka isbaddalka iyo saamaynta isbaddalkaas uu ku yeelano danaha siyaasadeed ee is riixaya ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha, iyo horgalayaasha lagu tuhmayo in ay matalaan danaha shisheeye ee gobolka.